Oohinta Hooyo Nimco Aadan iyo Gardaduubka Mafage: “Wiilkaygii waa la Qafaashay” – Radio Daljir
Juunyo 6, 2017 9:01 g 1
Hooyo Nimco Aadan Cabdulaahi waa hooyo Soomaliyeed oo danyar ah, kuna nool magaalada Hargeysa. Hooyo Nimco wiilkeeda oo magaciisu yahay Nasradiin Jamaal Xasan, ahna wiil dhalinyaro ah, ayaa wuxuu u gacangalay oo qafaashay Maggafaha Liibiya.
Baraha bulshadda ee Wajibuug (Facebook) waxaa isbuucan haystay wiilkaas oo si naxariis darro ah ugu gardaduuban Soomali-gataha Maggafe.
Waxaan raadinay hooyo Nimco, waan helnay, laakiin waa beer wax dhalay e waxay awoodi wayday in ay ka warbixiso xaaladda wiilkeeda, wayna ilmaysay ayda oo ku hadaaqaysa silica haysta wiilkeeda.
Intaan la hadlayey Hooyo Caasha oo ilmaynaysa, taleefoonka waxaa la booday Caasha Axmed oo kamid ah qaraabada qoyska, waxayna naga codsatay in ay iyadu inoo warranto, maadaama aysan hooyo Nimco hadli karin. Caasha waxa ay noo sheegtay in 3 bilood uu wiilku maqanyahay, uuna ahaa arday dugsiyada sare, awalna uu bariiska reerka la cuni jiray. Caasha waxaa kale oo ay noo sheegtay in qoysku yahay qoys danyar ah oo aan madaxfurasho awoodin.
Caasha waxaa ay ku dartay in madaxfurashada qafaashe Maggafe dalbaday ay tahay $8,700 aysanna marnaba awoodin wax intaas le’eg iyo wax u dhow toona, laakiin dadka Soomaaliyeed ay ka codsanayaan in la caawiyo.
FG: Qofkii gacan siin kara hooyadaas Soomaaliyeed, magaceedu waa Nicmo Aadan Cabdulaahi, waxay ku nooshahay Hatgeysa, taleefoonkeeduna waa: Bannaanka +252-633-394-287/Gudaha 063-339-4287
Maxamed Lakiman ayaa waraystay
Caawa & Daljir iyo Maxamuud Cabdi Ibrahim (dhegayso)
Xamdan Ugaas Nuur 3 years
wa Arin murugteedale ilaahay hawfududeyo